४० घण्टामा १ हजारभन्दा धेरै रकेट हान्दा इजरायललाई बचाइरहेको ‘आइरन डोम’ के हो ? – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख २९, २०७८ समय: २३:३८:२२
काठमाडौं। पछिल्लो समय इजरायल र हमासबीच युद्ध चर्किएको छ । इजरायल विरोधी संगठन हमासको नियन्त्रणमा रहेको गाजा क्षेत्रबाट इजरायलतर्फ सोमबारदेखि बुधबारसम्म ४० घण्टामा १ हजार भन्दा धेरै रकेट प्रहार भएका छन् । इजरायलले आफ्नो ‘आइरन डोम’ प्रतिरक्षा प्रणालीका कारण आफूलाई यी आक्रमणबाट बचाइरहेको छ ।
यो क्षेत्रमा यो संघर्ष १०० वर्षभन्दा पुरानो हो । यहाँको वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी र गोलन हाइट्सजस्ता क्षेत्रमा विवाद छ । प्यालेस्टाइनले यीसमेत पूर्वी जेरुसेलमसम्म आफ्नो दावी गर्छ । उता इजरायल पनि जेरुसेलममा आफ्नो दावी छोड्न तयार छैन । ताजा विवाद रमजानको महिनामा सुरु भएको थियो ।
जेरुसेलममा इजरायली पुलिस र प्यालेस्टाइनीहरुबीच झडपका खबर आइरहेका बेला इजरायलले पूर्वी जेरुसेलमको शेख जर्राहबाट प्यालेस्टाइनी परिवारलाई हटाउन थाल्यो । यसैको विरोधमा जेरुसेलमका अल अक्सा मस्जिदमा रमजानको अन्तिम जुमामा हिंस्रक प्रदर्शन भए । त्यसपछि हमासले रकेट हान्न थाल्यो र युद्धको स्थिति बन्यो ।
प्यालेस्टाइनमा सक्रिय दुई चरमपन्थी संगठन इजरायलको निशानामा रहन्छन् । पहिलो राजनैतिक रुपले शक्तिशाली हमास संगठन र दोस्रो प्यालेस्टाइनी इस्लामिक जिहादी अर्थात पिआइजे । यीमध्ये हमास सबैभन्दा प्रमुख हो र यसको गाजा पट्टीमा कब्जा छ । पछिल्लो विवादमा यही संगठनले इजरायलमाथि रकेट आक्रमण गरिरहेछ ।
एक समय हमास र पिआइजेले इरानजस्ता देशको सहयोगबाट वा समुद्रमा तस्करीको माध्यमबाट हतियार पाउँथे । पछिल्ला केही वर्षमा यी संगठनले आफैं रकेट बनाउन थालेका छन् । हमाससँग १०० देखि १६० किलोमिटरसम्म हान्न सक्ने रकेट छन् । यति क्षमता तेल अभिभ, बेन गुरियन एयरपोर्ट र जेरुसेलमजस्ता इजरायलका प्रमुख सहरमा प्रहार गर्न पर्याप्त छ । इजरायलको इन्टेलिजेन्स रिपोर्टका अनुसार हमाससँग जे–८०, एम–७५, फज्र–५ सेकेण्ड जेनेरेसन एक–७५ रकेट छन् ।
इजरायलले आफ्नो इन्टेलिजेन्स रिपोर्टका आधारमा हमाससँग ५ हजारदेखि ६ हजार रकेट हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । हमाससँग ४० हजार लडाकु पनि छन् । पिआइजेसँग ९ हजार लडाकु र ८ हजार छोटो दूरीका रकेट छन् । २०१४ को युद्धमा हमासले ५० दिनमा ४ हजारभन्दा धेरै रकेट हानेको थियो । यी ५० दिनमा उसले सुरुमा १ दिन २ सय रकेट हानेको थियो । त्यसपछि उसले दैनिक रकेट हान्ने संख्या घटाएको थियो ।
इजरायली समाचार वेबसाइट द जेरुसेलम पोस्टका अनुसार यस पटक परिस्थिति फरक छ । यसपटक हमासले आक्रमणको सुरुवाती ५ मिनेटमै १३७ रकेट हानेको थियो । अहिलेसम्म उसले १ हजारभन्दा धेरै रकेट हानिसकेको छ । यसले अहिले हमासको शक्ति बढिसकेको देखिउँछ । धेरैजसो रकेट उसले तेल अभिभ करिडोरमा हानेको छ ।
आइरन डोम के हो ?
गाजा क्षेत्रबाट लगातार आक्रमण भइरहे पनि इजरायललाई आइरन डोमले बचाइरहेको छ । आइरन डोम एक प्रकारको रक्षा प्रणाली हो । यसलाई राफेल एडभान्स्ड डिफेन्स सिस्टम र इजरायल एयरोस्पेस इन्डष्ट्रिजले मिलेर तयार गरेको हो । अमेरिकाले यसमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।
युएइको अखबार द नेशनलको एक रिपोर्टअनुसार आइरन डोम १० वर्षअघि २०११ मा सक्रिय भएको थियो । गाजातर्फबाट आएका सर्ट रेन्ज रकेटलाई जमिनमा खस्नुभन्दा पहिल्यै हावामै नष्ट गर्ने यो प्रणालीको उद्देश्य थियो । आइरन डोमको एक हिस्सा मध्यम र लामो दुरीका मिसाइलको लागि पनि बनाइउको छ । यसले लडाकु विमानबाट हानिएका मिसाइल र ड्रोनलाई पनि निशाना बनाउन सक्छ ।
आइरन डोमले राडार प्रणालीमा आधारित रहेर काम गर्छ । राडारले इजरायलतर्फ आइरहेको कुनै रकेटबाट खतरा छ कि छैन भन्ने हेर्छ । कुनै रकेट बस्ती क्षेत्र वा अहम भवनतर्फ आइरहेको महसुस भएमा ब्याटल म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलबाट संकेत पठाइन्छ र मोवाइल युनिट वा लन्चर साइटबाट इन्टरसेप्टर हानिन्छ । इन्टरसेप्टर आकाशमा ठाडो जाने मिसाइल हो । यी मिसाइल आकाशमा दुश्मन रकेटसँग ठोक्किएर विष्फोट हुन्छन् । यसबाट रकेट आकाशमै नष्ट हुन्छन् ।
वाशिङटन पोस्टको एक रिपोर्टअनुसार फरक फरक रक्षा विश्लेषकले इजरायलको आइरन डोमको सफलता दर ८० देखि ९० प्रतिशत भएको बताएका छन् । आइरन डोमको विषयमा अध्ययन गरेका क्यानडाको की ब्रोक युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर माइकल अर्मस्ट्रंगका अनुसार कुनै पनि मिसाइल डिफेन्स सिस्टम शतप्रतिशत भरोसायोग्य हुँदैन ।
अमेरिकी मरिनमा काम गरिसकेका र लण्डनको किंग्स कलेजको वार स्टडिज डिपार्टमेन्टबाट पीएचडी गरिरहेका रब लीका अनुसार यदि कसैसँग बीएम बीएम–२१ ग्रेड सिस्टम छ भने त्यसबाट २० सेकेण्डमा ४० रकेट हान्न सकिन्छ । यस्तो रकेट प्रणालीको यदि पूरै ब्याट्री वा बटालियन छ भने त्यसले २० सेकेण्डमा २४० देखि ७२० सम्म रकेट हान्न सक्छ । विश्वको कुनै पनि मिसाइल डिफेन्स सिस्टमले यति धेरै रकेटलाई रोक्न सक्दैन ।
आइरन डोमको कमजोरी अहिले पनि देखिएको छ किनकि गाजातिरबाट आएका कैयौं रकेट इजरायलको जमिनमा पनि खसेका छन् । यसबाट कैयौं भवन क्षतिग्रस्त भए । आक्रमणमा ५ जना इजरायलीको मृत्यु भइसकेको छ । प्रतिउत्तरमा इजरायलले पनि आक्रमण गरिरहेको छ । पछिल्लो २ दिनमा इजरायलको एयरफोर्सले हमासका अड्डामा १३० भन्दा धेरै हवाइ आक्रमण गरेको छ । इजरायलका धेरैजसो लडाकू विमान एफ सिरिजका छन् जो अमेरिकामा बनेका हुन् ।
३१९५ पटक हेरिएको